Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yokuphila kwiPC | Iindaba zeGajethi
Uhlobo lokusinda lusasazeke kakhulu kule minyaka idlulileyo, amandla okonyuka kweekhompyuter zethu kunye neenjini zemizobo ecokisekileyo ezigcwalise uhlobo ngobomi kunye neentlobo ngokungathandabuzekiyo ezinabalandeli abaninzi. Sinayo ukusukela ngoko Ihlabathi le-post apocalyptic lihlaselwe yiZombi, i-odysseys yendawo, ukuphuka kweenqanawa kwiilwandle eziphakamileyo, nokuba lixesha leedinosaurs. Imihlaba eyahlukeneyo ehambelana kwipateni enye, ukusinda njengeyona njongo yokufezekisa.
Kweli nqaku sifuna ukuphinda sihlolisise i-10 ethi ngokoluvo lwethu iphawule olu hlobo lohlobo, olunako ukusigcina sibambekile kangangeenyanga, kokubini kwinkampani kwaye sisodwa, senza amava ethu abe yinto yolonwabo. Nantoni na ihamba nje ukuba usinde, uzinge, wakhe, ubaleke, utye, ulale kwaye ngaphezu kwako konke ulwe nobunzima. Ukongeza kwintsebenziswano, into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo yenze izinto zibe lula kakhulu kolu hlobo lomdlalo wevidiyo. Hlala nathi ngeyona mizekelo ilishumi ilungileyo yokusinda kwiPC.
1 Ityeya: Ukusinda Kwasungulwa
4 Ukukhishwa kweConan
6 I-State of Decay 2
7 Isihogo Esiluhlaza
10 Umvumisi weenkwenkwezi
Ityeya: Ukusinda Kwasungulwa
Ubudala beedinosaurs bubuyela ebomini bethu ngalo mdlalo wokuphila womntu wokuqala onomdla. Ayingowona mdlalo wevidiyo ucocekileyo kwintengiso, kodwa ukuba yenye yezona zidumileyo kwaye zimnandi kule minyaka idlulileyo. Inempawu ezininzi ezenza ukuba ukukhula kwayo kube nkulu kunye namava atyebisayo okusinda kunye nokwenza. Zonke yenzeka kwisiqithi esiyingozi esigcwele iidinosaurs.
Umdlalo lihlabathi elivulekileyo, ke sinemephu yonke evulwe kwasekuqaleni, Iqale njengomdlalo wokufikelela kwangoko, ke abasebenzisi bokuqala bafumana ubunzima obungapheliyo ethintele ukonwaba okunzulu kuyo. Ngoku sijamelene ne-adventure apho ukuhlala sikhuselekile kuya kufuneka fumana ukutya namanzi, ukuzivumelanisa notshintsho ngesiquphe kubushushu.
Nokuba siyanqamula, isimilo sethu siza kuhlala sibhaptiziwe kwihlabathi, ke kubalulekile ukuba sakhe indawo yokuhlala apho sinokuchitha ubusuku sikhuselekile kwiingozi ezihlala kuloo ndawo. Singazilima ukutya kwethu kwaye yenza isizwe kunye nabanye abahlaliOku kuyacetyiswa kakhulu njengoko intsebenziswano ingasindisa ubomi bethu.
Umdlalo owahlukileyo nowahlukileyo awukho omnye, apho sifumana ilizwe elihle elingaphantsi kwamanzi apho kufuneka singene khona, lixabisekile njengoko liyingozi. Siza kungena kwilizwe lasemzini elingumphambukeli apho ubomi bazo zonke iintlobo zezidalwa buyaphuphuma. Injongo yethu iya kuba kukusinda kubo bonke ubungozi obufihliweyo, phakathi kwazo izilwanyana zibonakala, zibulala ngakumbi kunokuba zinokubonakala ekuqaleni.
Siya kuba nomdla wokufumana indawo yokusabela apho sinokuphumla kwaye oku kuya kujonga izixhobo kuyo yonke imephu ebanzi. Singazenzela ezethu izithuthi ukwenza uhambo olude lunyamezeleke kwaye siphephe ezi zidalwa ziyingozi Oko kuzimela kwikona nganye. I-Subnautica ngumdlalo ocetyiswa kakhulu ukuba ufuna ukonwabela amava amnandi nayingozi.
Yeyiphi eyona nto imbi inokwenzeka kuwe xa usinda kwingozi yenqwelomoya? Siza kucinga ukuba emva kokubandezeleka kwingozi leyo akukho nto yenzekayo kuthi enokuba mbi, kodwa umlingisi wethu ophambili unethamsanqa elibi lokungena Ihlathi elikhulu eligcwele izidlo ezinokuguquka, kwisitayile esicocekileyo iinduli zinamehlo. Umdlalo awusiniki uxolo, ukusukela oko maxa onke sinemvakalelo yokuba kukho into esijongileyo kwaye sele eza kusihlasela. Ukuziva singakhuselekanga, asinakukunciphisa ukuthobela kuba ngawo nawuphi na umzuzu kuya kufuneka sibaleke okanye sijongane nomlo.
Olu lonwabo luneengozi emva komthi ngamnye, iingozi ekufuneka sijongane nazo, isixhobo esifanelekileyo nxamnye noku kuyilwa kwezixhobo. Siza kwakha iinkampu zethu kunye nemililo yokulwa ingqele. Kodwa asinakufihla ngonaphakade, njengoko kuya kufuneka siphonononge ukuqokelela izinto kunye nezixhobo ukuze siqhubeke sikhula kulonwabo.
Njengoko igama libonisa, lo mdlalo esekwe kumoya weConan the Barbarian. Ihlabathi apho kuya kufuneka sizabalazele ukufumana ubuqaqawuli bendlu yethu kwaye soyise eyona mimandla inokwenzeka. Ukufezekisa iinjongo zethu kufuneka sihlolisise umhlaba ocebileyo ogcwele izinto kunye neendawo ezizele zixhobo, kodwa soloko unikela ingqalelo kwimozulu njengoko kokubanda nobushushu kunokubulala. Siza kujongana neentshaba zabantu ezingenanceba kodwa kunye nezidalwa.
Ekuqaleni kunokubonakala ngathi ngumdlalo osisiseko apho silwa khona kwaye siphumle, kodwa ilizwe lalo ligcwele iikona apho siza kufumanisa khona iimfihlo ezininzi ezifihliweyo. Kuya kufuneka sijongane neemfazwe phakathi kwezindlu, ukungqinga, ukwakhiwa kwezixeko kunye nokuzikhusela. Ukuba ungumntu othanda indalo iphela, lo mdlalo uya kukwenza uchithe iiyure zokuzonwabisa.
Omnye woovulindlela bohlobo lokusinda kwi-PC, eyaziwayo kwaye ethandwa kakhulu phakathi kwabalandeli be Ihlabathi le-apocalyptic elihlaselwe sisifo se-zombie. Imidlalo yabo ikwi-Intanethi ngokupheleleyo, apho siza kudibana nabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela, kodwa kananjalo singadlala nabahlobo bethu kwaye senze iqela elifanelekileyo lokuzikhusela bobabini abafileyo abafuna ukusiqwenga, kunye neentshaba ezingabantu eziya kufuna ukusiphanga ukuze sigcine yonke into esiyenzileyo.
I-Chernarus, indawo yomdlalo wehlabathi lihlaselwe kukushiywa kunye nokungahoywa kwabemi balo ngenxa yesifo esiye sabandezeleka, apho ekuphela kwento eseleyo ezitalatweni zayo kukungafiyo. Kuya kufuneka siphile kwaye siwalumkele amanxeba ethu kuba sinokosulelwa okanye sibambe izifo. Imozulu ikwabalulekile kwaye kuyakufuneka sizakhele izindlu zethu zokufihla intloko, kuba iyakuba yenye yeendawo ezimbalwa apho sinokukhuseleka ngokupheleleyo. Icala elisezantsi kuphela loluntu, Ukugcinwa ngabaphuhlisi kubi kwaye abanye abasebenzisi bayazibandakanya kwii-hacks ukuze bacaphuke kwabanye abasebenzisi.
I-State of Decay 2
Okungakumbi okungafunekiyo kunye nelinye ilizwe elonakaliswe ngubhubhane, likhadi lokufowuna lomdlalo wevidiyo osindayo. Kule meko, umdlalo ngamnye wahlukile, kuba ixesha ngalinye siqala iinjongo zokufezekisa kwaye nabemi bayo baya kwahluka. Asizukujongana neZombies kuphela ukuze siphile, kuya kufuneka sibakhathalele kakhulu abanye abantu abaya kufuna ukuphanga indawo yethu yokuhlala.
Umdlalo ukwi-Intanethi kodwa icala lomdlali elinye liyonwabisa kwaye linomvuzo. Kuyacetyiswa ukuba uyidlale kwi-intanethi kunye nabahlobo bakho kwaye sisebenzisane ukwenza amava abe yinto enzulu ngakumbi, apho ukwabelana kunye nokulwa ngokujoyina imikhosi kuya kuba yeyona nto yethu yexabiso. Kuyo yonke le nto siya kuhlala sifumana umvuzo, ezakusenza ukuba siqhubele phambili kwaye sinemvakalelo yokuba ixesha ngalinye lokudlala siphucule kancinci.
Isihogo esiluhlaza njengoko isihloko ngokwaso sisixelela, lo mdlalo wevidiyo unjalo iseti kwihlathi laseAmazon. Siya kuhlala sedwa kule ndawo intle kodwa kwangaxeshanye yoyikisa umhlaba, apho owona msebenzi wethu uphambili iya kuba kukulwela ukusinda. Kuya kufuneka silawule kungekuphela nje ukudala umlilo ukuzipheka okanye ukuzifudumeza, kuya kufuneka sifumane indlela yokwakha indawo yethu yokuhlala okanye siyenze emqolombeni, nengozi ebandakanya oku.
Kubonakala ngathi ngumdlalo wokusinda obekwe ehlathini, de siqonde ukuba umlinganiswa wethu ophambili ulahlekelwa yingqondo. Masithi iyanyanzelwa ngokupheleleyo kwimeko yoyilo. Asisayi kufa yindlala kuphela, kodwa kuya kufuneka siphilise nawaphi na amanxeba okanye usulelo esinalo. Ibandakanya inkqubo yokuhlola umzimba etyebileyo, eyenza ukuba kube lula kakhulu kuthi ukuba siyiphilise. Sinokonwabela i-adventure yodwa okanye intsebenziswano yabadlali abaninzi.
KwiRust i-adventure iqala njengoko uThixo wasizisa emhlabeni, ze ngokupheleleyo, okuhambisa isidingo esingxamisekileyo sokuya phambili ukunciphisa imeko. Siza kukhangela amatye kunye neenkuni ukwenza umlilo, ukusebenzisa inyama ukuzondla kunye nezikhumba ukunxiba. Oku kubonakala kulula, kodwa Umdlalo ugcwele abanye abasebenzisi babantu abafuna nje ukusiphanga. Ke ngoko kufuneka silwe nabo ukuze siphumelele.
Izilwanyana zasendle kunye nabantu zihlala ziseRust, ke kuya kufuneka sakhe ilali yethu kwaye siyikhusele ukuze sizikhusele kuzo. Ngumdlalo okwi-Intanethi ukuze abantu babanye abadlali abavela kwihlabathi liphela. Isitshixo yinto yokuyila, kugxilwe ngokucacileyo kulwakhiwo. Njengoko sisiya phambili siya kuyibona loo nto Olona khetho lulungileyo kukwenza ubudlelwane kunye nabanye abadlali ukulwa kunye nayo yonke ingozi kunye nokwabelana ngezixhobo.
Owona mdlalo wevidiyo uthandwa kakhulu ngalo lonke ixesha, ngaphandle kwamathandabuzo owona mzekelo ubalaseleyo wokuthandwa kolu hlobo. Ngumdlalo omnandi kubo bonke abaphulaphuli kodwa uzele intiyo. Inqaku lesihloko ngokungathandabuzekiyo uyilo lwezinto kunye nolwakhiwo lwezixhobo. Xa yonke into ibonakala izolile, sinokuhlaselwa ziintshaba, ukusuka kwizidalwa ukuya kwabanye abasebenzisi.
Iiklasi ezingenakubalwa zeentshaba zihlala kwilizwe lazo elikhulu, ngoko ke kulula ukuba usebenzise wonke umzuzu ukuqokelela izibonelelo ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Ukuphonononga yenye yezona zinto zibalulekileyo zomdlaloKuba kuxhomekeke ekubeni siyakwazi na ukuqhubela phambili, siya kungena kwinkoliso yemingxunya kwaye ngenxa yoku kuyakufuneka sizilungiselele kakuhle, kokubini kwizixhobo nakwizixhobo.
Siluphelisa uluhlu ngento eyahlukileyo kunenye, Umdlalo we-intergalactic apho sihlola khona iiplanethi ezisixhenxe ezivela kwenye inkqubo yelanga. Siza kuba nakho ukuguqula imeko kunye nokuphonononga i-intshi nganye kwiplanethi nganye ngokuthanda. Kuya kuba kubaluleke kakhulu ukuqokelela zonke iintlobo zezixhobo njengoko kuqhelekile kolu hlobo, kunye nokwenza izithuthi okanye iziseko zokuphumla.
Njengoninzi lwamalungu olu luhlu, inokudlalwa ngokubambisana, eya kuthi yandise kakhulu ukhetho lomdlalo. Ayizukukwazi kuphela ukuphonononga umphezulu, siya kuba nomhlaba ongaphantsi komhlaba apho ubutyebi obuxabisekileyo obuzakufunyanwa buya kufihlwa kunye nezinto zokuphucula inqanawa yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yokuphila kwiPC
Molo ngokuhlwa, andazi ukuba le yindawo elungileyo yokubeka izimvo ngale nto, ukuba akunjalo, ndiyaxolisa! Inqaku leli lokuba kunye nabahlobo bam sidlala ukuba ngabecuphi babucala e-Barcelona kwaye ngoku xa sisekhaya sifuna ukudlala umdlalo we-pc womcuphi, ngaba ungacebisa omnye? Sikhangela kwiiwebhusayithi ezininzi kwaye asizifumani. Enkosi!!
I-Huawei MatePad, uhlalutyo: Ithebhulethi emele i-iPad